ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီ adapter
အဘယ်ကြောင့်ပါဝါ adapter ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းအပူနှင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသလဲ?
လက်တော့ပ်ကိုသုံးသောအခါ၊ အထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်အားသွင်းချိန်နှင့်အသုံးပြုချိန်တွင်ပါဝါ adapter သည်အပူရှိန်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အပူစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးထုတ်လွှတ်သည်။ အဖြစ် ...
PC power supply သည် power supply ကိုထောက်ပံ့သောလျှပ်စစ် converter တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် PC power supply သည်ကွန်ပျူတာ၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက် AC power ကို low-voltage regulated DC power သို့ပြောင်းပေးသည်။ ခေတ်သစ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများသည် switch mode power supply ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိတယ်။ Som ...
PD မြန်သောအားသွင်းမှုနှင့် QC အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းမှုတို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ဤအလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းနည်းနှစ်မျိုးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသဟဇာတဖြစ်နိုင်ပါသလား။
အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာများမှာမတူကွဲပြားသော်လည်းအရေးကြီးဆုံးသောအချက်များမှာ Apple စခန်း၌ PD မြန်သောအားသွင်းခြင်းနှင့် Android စခန်းရှိ QC အမြန်အားသွင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ QC3.0 သည် Qualcomm မှစတင်မိတ်ဆက်သောတတိယမျိုးဆက်အစာရှောင်ခြင်းပရိုတိုကောဖြစ်သည်။ QC3.0 အားသွင်းစက်သည် Qualcomm ၏ Quick Ch ...
တကယ်တော့ SFX power supply က ATX power supply ကိုအစားထိုးမှာလား။
GaG charger တွေလာမလား။
စံပြ charger သည် interface များစွာနှင့်စွမ်းအားမြင့်စွာရှိသင့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် device များစွာကိုအားသွင်းနိုင်လောက်သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မှတ်စုစာအုပ်များအားလုံးရရှိနိုင်ပြီးအရွယ်အစားမှာပုံမှန် port တစ်ခုအားသွင်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ အိမ်မှဖြစ်စေဖြစ်စေ၊
20-01-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်း၊ အမှတ်တံဆိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်သုံးစွဲသူများအတွက်အမြဲတမ်းအစိုးရိမ်ဆုံးကိစ္စဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိကျော်ကြားသောစွမ်းအင်ပေးသွင်းသူများနှင့်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သူများအားကြည့်လျှင်၎င်းတို့သည်တူညီသောဖိအား၊ စျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Power supply equipment သည်မြင့်မားသောနည်းပညာပါ ၀ င်မှု၊ ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတနှင့်မြန်ဆန်သော update များဖြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါ၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်၊ လေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ သတင်းအချက်အလက်ခေတ်, အထက် - မီတာ ...
ATX power supply ကိုသုံးတဲ့အခါဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
19-12-17 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ထုတ်ကုန်အတော်များများသည်၎င်းတို့အသုံးပြုသောအခါဂရုပြုရန်အရာများစွာရှိရမည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအလုပ်၏ထိရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊
ပါဝါအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုသည်စွမ်းအင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတွန်းအားပေးသည်။ စွမ်းအင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စွမ်းအင်ကဏ္ industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ပေးသည်။ ယခုအချိန်အထိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသောအခြေခံနည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာပြီးအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာပါဝါ adapter ကအပူပေးပြီးဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။
Address: အဆောက်အ ဦး B, Tesitai စက်မှုဇုန်ပန်းခြံ, Liyuhe, Gongming, Guangming, Shenzhen
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. Featured ထုတ်ကုန်များ - Sitemap - Mobile Site
Atx Power Supply , Smps Power Supply , 250w Psu , Voltage Atx Power Supply , Computer Psu 300w, Computer Power Supply ,